Växjö: Soo galooti dambe qaadan mayno | Somali24
Follow us on Twitter	Connect on Facebook	Växjö: Soo galooti dambe qaadan mayno
July 16, 2012 | Filed under: SWEDEN,World News | Posted by: admin Iyadoo hada ay soo bilaabatay keenista qoysaska Soomaalida ayaa waxaa soo baxaysa saameynta ay yeelanayayaan dadkaas reerahooda lala mideynayo. Kamuuno dhowr ah oo horay uga hadlay dhibaatooyinka soo wajihi doona marka ay Soomaalida cusub yimaadaan ayaa wali sii wada cabashadii. Kamuunka Växjö oo ka mid ah degmooyinka sida weyn isugu diyaariyay soo dhaweynta Soomaalida cusub ayaa gudoomiyaha degmadaas waxa uu ka hadlay qarashka ku baxaya soo galootiga guud ahaantooda.
Mowduuc uu ku qoray wargeyska Smålandsposten ayaa ninka lagu magacaabo Bo Frank waxaa ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay leedahay in dowlada Sweden ay bixiso qarashka cayrta ee ku baxaya soo galootiga. Gudoomiyaha ayaa sheegay in 600 qof oo timid Växjö labadii sano ee la soo dhaafay ay 6 keliya heleen shaqo inta kalena ay qaataan cayr. Arintaas ayuu ku tilmaamay mid uusan kamuunkiisa xamili karin. Dadkaan uu ka hadlayo Bo Frank ayaa ah dadka soo galootiga ah ee wadanka iska dhiibay iyo kuwa dacwada lagu keenay. Waxa uu sheegay in masuuliyada dadkaan ay leedahay dowlada Sweden oo laga doonayo in ay bixiso qarashka iyo lacagta cayrta ee ay qaadanayaan dadkaan.
Bo Frank ayaa sheegay in uu hada doonayo in uu dolwada heshiis kula galo in aysan wax soo galooti cusub ah qaadan doonin balse ay soo dhaweynayaan dadka reerahooda lala mideynayo oo keliya. Arintaas ayuu sabab uga dhigay in dadkaan ay waxyeelo gaarsiinayaan dhaqaalaha degmadiisa.
Dhinaca kale, kamuunka Katrineholm oo iyaguna hada ka hor soo bandhigay fikrado la mid ha mida Växjö ayaa ka dhawaajiyay arin la filayo in ay ka careysiiso dadka deegaanka. Agaasimaha arimaha dhaqaalaha ee kamuunkaas ayaa sheegay in haddii aysan dowladu bixin lacagta ku baxaysa soo galootiga qaasatan Soomaalida cusub ee hada soo bilaabatay in ay ku qasbanyihiin in canshuurta ay ku kordhiyaan dadka magaalada iyo in ay shaqada ka cayriyaan qaar ka mid ah shaqaalaha kamuunka si lacagta loogu helo Soomaalida.
Arintaas ayaa ah mida ugu weyn ee ay ku doodaan cunsuriyiinta oo ah in soo galootiga iyo qaasatan Soomaalida ee waxbarashada aan lahayn ay dhibaato dhaqaale ku yihiin wadanka, oo ay nolosha ku adkeynayaan dadka wadanka u dhashay.
Dowlada ayaa bishii hore xoogaa u dabacday dalabyada kamuunada iyaga oo sheegay in dadka cusub ee iimaanaya lagu dari doono xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) oo lacagtooda ay bixin doonto dowlada. Balse arintaas ayaan wali la dhaqan galin, isla markaana waxaa muuqata in kamuunada aysan ku qanacsaneyn guud ahaanteeda.